Iphethini enhle, umbhalo ocacile, akukho mbala ophelayo Khetha izinto ezisezingeni eliphezulu ngokucophelela, ikhwalithi yomkhiqizo ingabonakala ezithombeni zangempela.
Ingaphezulu libushelelezi, umsebenzi owenziwe uyisicaba, futhi ukufezeka kunamandla.
1. Uma ungazi ukuthi ungayipakisha kanjani imikhiqizo yakho, sizokunikeza ukupakishwa okufanele kwemikhiqizo yakho.Hlanganisa izinto zakamuva ezidumile emakethe futhi uzihlanganise emcabangweni wokuklama ukuze udale ukukhangisa kwamahhala kwemikhiqizo yakho.
2. Uma unesabelomali, sizokhetha izinto ezifanele zomklamo wakho wokupakisha, futhi siklame ibhokisi lokupakisha elingabizi kakhulu phakathi kwesabelomali.
3. Uma unephakheji eklanywe kahle, sizokwenzela ngokwezifiso iphakheji efanayo yekhwalithi ephezulu.
1. Ubufakazi bamahhala.Ngemva kokufaka i-oda lokukhiqiza ngokuvumelana nokusalungiswa komklamo, imali yokuqinisekisa izobuyiselwa ngokugcwele.
2. Imboni yangempela.Ukwakhiwa kwesevisi eyodwa-stop kusiza ukusetshenziswa komnotho wesilinganiso.Siza amakhasimende athole imikhiqizo engabizi kakhulu.
3. Idizayini yamahhala.Nikeza ngezinsizakalo zokuklama eyodwa-to-one.Umklami uxhumana nekhasimende ngalinye ngokuningiliziwe, usebenzisa ngokunembile izidingo zedizayini zekhasimende ngalinye, unikeza iziphakamiso kanye nezinsizakalo zokulungiswa ngemva kokulungiswa, futhi uxazulula izinkinga ezifana nokubambezeleka kwedizayini nokuxhumana okungekuhle ngesikhathi sokulungiswa komklamo.
4. Isiqinisekiso sesikhathi sokulethwa.Ipakishwe ngokuphelele futhi ingathunyelwa ngekhwalithi kanye nenani phakathi nesikhathi esibekiwe sokulethwa.
5. Uyinki we-UV wekhwalithi ephezulu.Uyinki we-UV awunazo izincibilikisi eziguquguqukayo, okungukuthi, ifomula engancibiliki engu-100%, ngakho-ke ama-organic volatiles awakhishelwa emoyeni ngesikhathi senqubo yokuphrinta, ehambisana nokuphishekela ukuvikelwa kwemvelo.
Okwedlule: Ibhokisi Lesipho Lephepha Lekhadibhodi Lekhwalithi Ephakeme
Ibhokisi lemaski lebhokisi lemaski yebhokisi lemaski yezokwelapha...
I-SIUMAI Corrugated shipping boxes custom ukupakisha...